News & Announcements | KyoPay
Sell An Invoice
Buy an Invoice
IKBZ Insurance Co., Ltd Confirms Testing KyoPay’s Online Platform to Diversify Investment Portfolio
November 18, 2019 - IKBZ Insurance Co. has signed up in KyoPay’s platform to doaseries of pilot transactions with carefully selected and vetted accounts receivables from local and foreign businesses in Yangon. During the first p…
KyoPay Sponsors Power Soccer Football Academy to Support the Underprivileged Youth in Myanmar
Moving the World Together: “Meaningful partnerships will always go beyond just doing business, we are happy to support the continuous learning and growth of these children through sport…” Riza Cuartero, KyoPay CEO November 8, 201…
KyoPay Technologies မှ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်း၍ ပထမဆုံး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်
(ကုမ္ပဏီ၏ ငွေကြေးလည်ပတ်စီးဆင်းမှုကို Invoice Discounting နည်းလမ်းအသုံးပြု၍ KyoPay Online Platform ထောက်ပံ့ကူညီမှုဖြင့် မြန်ဆန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း) ရန်ကုန်၊ မြန်မာ (ဇွန် ၁၈၊ ၂၀၁၉) ။ ။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ…
Payment များကို အခက်အခဲ အနည်းဆုံးသော နည်းလမ်းများဖြင့် ကောက်ခံခြင်း
(၁) ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သော ငွေပေးချေမည့် နေ့ရက် နှင့် အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း ရောင်းချသူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဝယ်ယူသူများထံမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ငွေပေးကာလ - ၁၅ရက်၊ ၃၀ ရက်၊ ၄၅ ရက်၊ ၆၀ ရက်၊ ၉၀ ရက် အစရှိသဖြင့် ငွေပေးကာလ ပြည့် ပြီး မ…
နေ့စဉ် အသုံးစရိတ် ချွေတာနိုင်မယ့် နည်းများ
အဲ့တာတွေကတော့ သင် လကုန်တဲ့ရက်တိုင်း လက်ထဲမှာ င့ါ ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်ရောက်သွားလဲ၊ ဘာလို့ ပိုက်ဆံ မစုမိတာလည်းဆိုပြီး တွေးနေမိပါသလား? ကျွန်တော် ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာပြောပြချင်ပါတယ်။ အခုပြောပြမယ့် အချက်တွေကတော့ ပိုက်ဆံ စုမိဆောင်းမိဖို့ တစ်အာ…
KP Technologies (KyoPay), an online marketplace for invoice receivables that offersafast, simple, and secure way for businesses in Myanmar to improve cash liquidity.
© 2017 — 2020, KyoPay.com.mm. All rights reserved.